Home Somali News Somaliland: Shirkadaha TransferGalaxy Iyo Telesom oo Daah-furay Iskaashi Adeegga Xawilaada Dibadda Ah
Shirkadda TransferGalaxy Ee Adeegga Xawaaladda Casriga ah iyo Telesom Company waxay maanta si rasmi ah u daahfurayaan iskaashi adeeg (Service Partnership) dhinaca xawaaladda dibadda ah oo ay wada yeesheen. Adeeggan ay wada daahfurayaan labada shirkadood waxa uu suurtagalinayaa in si Online ah ay macaamiishu qurba joogga ahi 22 wadan oo Yurub ah uga soo xawili karaan lacagaha iyadoo ay eheladooda dalka joogaana xisaabahooda ZAAD Service ay si toos ah ugu heli doonaan.
Iskaashiga Adeegga Xawilaadda Dibadda ee Mobile-ka ee TransferGalaxy iyo Telesom Company waxa uu faa’iido wayn u leeyahay bulshada Somaliland ee sida tooska ah ugu tiirsan lacagaha ay eheladooda dibadda jooga ka helaan maadaama oo loo suurtagaliyay qurba jooga lacagta soo dira inay hanaan FUDUD oo AAMIN ah ay waqti kasta iyo goob kasta uga soo xawili karaan lacagaha ay dalka u soo dirayaan.
Xawilaadda lacagta dalka uga timaadda qurbuhu waa mid kaalin wayn kaga jirta nolosha dadka islamarkaana qayb ka ah dib u dhiska iyo horumarinta dalka, sidaasi awgeed, Iskaashigan adeegga Xawilaadda Dibadda ee TransferGalaxy iyo Telesom Companywaa mid fursad wayn ah isla markaana suurtaglin doona hanaan HUFAN oo xawilaadda dibaddu ugu timaado bulshada Somaliland.
TransferGalaxy waxaad lacag kaga soo diri kartaa 22 wadan oo Yuru ah adoo u diri kara 14 wadan oo dunida oo dhan ah oo ay ugu horayso Somaliland.
Deg Deg: Ronaldo Oo Sheegay Inu Ka Tagi Doono Kooxda Real Madrid Iyo Kooxda U Tagi Doono